Translated RCC Meeting 1st October
Home RCC Translated RCC Meeting 1st October
Thursday, 08 October 2015 05:44	Translated RCC Meeting 1st October
57561 comments	Rate this item
чехол для планшетасоздать сайт на joomla	ဘေးသင့်ဒေသများအမြန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်မှုကော်မတီ
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ညှိနှိုင်းမှု စင်တာ၏ အဓိကလုပ်ငန်းများ ပြန်ထူညှိနှိုင်းဗဟို၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် များမှာ ထိရောက်သော ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်၊ ထိခိုက်ခံစားရသူအားလုံး အတွက်ပိုမို ကောင်းမွန်သည့် ဘ၀သို့ပြန်လည် ရောက် ရှိစေရေးနှင့် ထိခိုက်ခံစားရသူ အားလုံးထံသို့ ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေး အထောက်အပံ့များ အချိန်မီ စနစ်တကျအကူညီပေး နိုင်ရေးတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုစင်တာ၏အဓိကလုပ်ငန်းများ ပြန်ထူညှိနှိုင်းစင်တာကို ဦးဆောင်ရန်အတွက၊် ဌာနဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီး တစ်ဦးကိုရွေးချယ်၍ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ညှိနှိုင်းရေးမှုးအဖြစ်ရွေး ချယ်ခန့်ထားပေးပြီး အောက်ပါ အဓိကလုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ၁) လိုအပ်ချက်များကို စာရင်းကောက်ယူခြင်း၊
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုစင်တာ၏အဓိကလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လိုအပ်ချက်များကို စစ်တမ်းများ ကောက်ယူခြင်း။
စစ်တမ်းကောက်ယူရန် ညွှန်ကြား ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ စစ်တမ်းကောက်ကူမည့် သက်ဆိုင် ရာဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် အခြားနှီးနွယ် ဆက်စပ်သူများ အားလုံးကို စနစ်တကျ သင်တန်းပေးခြင်း၊ စစ်တမ်းကောက်ယူမည့် အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အခြေခံမူလ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ ကြိုတင်ကွင်းဆင်း ကောက်ယူထားခြင်း ဖြင့်သဘာဝဘေးဖြစ်ပွားမှု ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိူ စနစ်တကျ လေ့လာသုံးသပ်နိုင်မည် ဖြစ်ခြင်း၊ သဘာဝဘေးဖြစ် ပွားပါက ပြန်ထူညှိနှိုင်းဗဟိုမှ ဦးဆောင်၍ (PDNA) ကိုကောက်ယူရန်၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံး မှုများကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်းပြုစု ထိန်းသိမ်းထားခြင်း၊
သဘာဝဘေး ကျရောက်ပါက၊ ပြန်ထူညှိနှိုင်း ဗဟိုသည် သဘာဝဘေးစီ ခန့်ကော်မတီကို စစ်တမ်းများ ကောက်ယူရန် ပံ့ပိုးပေးပြီး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စီမံချက်များ ရေးဆွဲနိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်း၊ ယင်းစီမံချက်တွင်၊ အမြန်ဆုံး၊ အလယ်အလတ်နှင့် ကာလရှည် ပြန်လည်ထူထောင် ရေးလုပ်ငန်းများ ပါဝင်စေရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အခြေခံမူများသည် အနာဂါတ်တွင် ကျရောက်မှုမှ လျော့ပါးစေရေး၊ ဘီသုံးလုံး နှင့်သဘာဝအန္တာရယ် များမှကြံ့ကြံ့ခိုင် နိုင်ရေးတို့ပါဝင်ရမည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ပြန်ထူညှိနှိုင်း ဗဟိုသည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ကြမည့်် အမျိုးသား အဆင့် နှီးနွယ်ဆက်စပ် သူများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်သူများ ကိုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ပေးခြင်း၊ အလျဉ်းသင့်သလို ငွေကြေး ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ လိုအပ်သောပစ္စည်း များ ဝယ်ယူမှုတွင် ကူညီပေးခြင်း၊
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း။ ပြန်ထူညှိနှိုင်းမှု ဗဟိုသည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် ဖေါ် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကဏ္ဍအလိုက်၊ ဒေသအလိုက်၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူအလိုက် စောင့်ကြည့်လေ့လာရမည်၊ (Information Management System) ကိုစနစ်တကျ ထူထောင်ရမည်၊
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသတင်းအချက်အလက်များနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ပြန်ထူညှိနှိုင်း ဗဟိုသည် အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး ဗဟိုတို့ပူးပေါင်း၍ သတင်း အချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး၊ မီဒီယာများမှ ဖြန့်ဝေခြင်း တို့ဆောင်ရွက်ရပါမည်၊ လိုအပ်ပါက ဘေးသင့်ပြည်သူ များနှင့် အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများကြား ဖြစ်ပေါ်တတ်သည့် မကျေနပ်ချက်များ၊ ဖြေရှင်းပေးရန် လိုအပ်သည်များ ရှိပါကလည်း ကူညီဖြေရှင်းပေးရန်။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြန်ထူညှိနှိုင်း ဗဟိုသည် ပုဂ္ဂလိက အခန်းကဏ္ဍများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမ ဟုတ်သော အဖွဲအစည်းများ၊ အခြားနှီးနွယ် ဆက်စပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ အကြားတွင်ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရ မည်၊ လိုအပ်ပါက Early Recovery Network (ERN), UN agencies, Donors , INGOs များနှင့်လည်း ဆက်သွယ် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ပေးရမည်။
Read 119172 times	Last modified on Thursday, 08 October 2015 06:25	онлайн игрыгорнолыжные курорты	Tweet	Published in
RCC Meeting 1st October »
57561 comments	Comment Link	Tuesday, 31 May 2016 15:54	posted by	Occhiali da Sole Arnette AN4147 STICKUP Uomo Grigio Chiaro Polarizzato Outlet S1630	Someone essentially help to make seriously articles I might state. That is the very first time I frequented your web page and up to now? I surprised with the analysis you made to make this particular publish incredible. Wonderful activity!
Occhiali da Sole Arnette AN4147 STICKUP Uomo Grigio Chiaro Polarizzato Outlet S1630 http://www.fcclima.it/?it-18106_occhiali-da-sole-arnette-an4147-stickup-uomo-grigio-chiaro-polarizzato-outlet-s1630-p-18.html
Comment Link	Tuesday, 31 May 2016 15:49	posted by	Cathy	If some one wishes expert view concerning runningablog afterward i recommend him/her to payavisit this blog, Keep up the good work.
Comment Link	Tuesday, 31 May 2016 15:42	posted by	septic systems types cost	An excellent change of an ugly septic tank location will give you-the homeowner with and also aesthetically pleasing and functional area to enjoy life as well as amuse family and friends.
Comment Link	Tuesday, 31 May 2016 15:35	posted by	http://larastarmartini.com/vigneron-insurance.html	lo malo ahora es que ya han procreado y prentenden que se los devuelvaXDDD diles aquello de: "hay dos clases de tontos, los que prestan libros y los que los devuelven"...
Comment Link	Tuesday, 31 May 2016 15:18	posted by	http://koopmancontemporaryart.com/auto-insurance-manteca.html	*Iâ€™m impressed, I must say. Really rarely do I encounterablog thatâ€™s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.
Comment Link	Tuesday, 31 May 2016 15:06	posted by	Bernardo	Right here is the right site for anybody who wants to understand this topic. You realizeawhole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa).
Comment Link	Tuesday, 31 May 2016 15:02	posted by	striderel	Wohl, ich werde mit Ihrer Meinung zustimmen striderel
Comment Link	Tuesday, 31 May 2016 14:51	posted by	oakley originales	Your way of telling everything in this paragraph is really nice, every one be able to without difficulty be aware of it, Thanksalot.
oakley originales http://www.emartv.es/?es-6099_oakley-originales.html
Comment Link	Tuesday, 31 May 2016 13:35	posted by	Nate	We are regional and you speak straight to the Specialist which suggests we can make it out in about 15-20 mins for emergency calls.
Comment Link	Tuesday, 31 May 2016 13:14	posted by	Breanna	We'reagroup of volunteers and openinganew scheme in our community. Your website provided us with helpful info to work on. You have done an impressive process and our whole community shall be grateful to you.